'Orphan: First Kill' Prequel dia nahita studio vaovao ho tranony - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Kamboty: famonoana voalohany' dia nahita studio vaovao ho tranony
'Kamboty: famonoana voalohany' dia nahita studio vaovao ho tranony
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 1,984 hevitra
Niverina indray i Estera mba handroaka ny olona avy amin'ny helo. Amin'ity indray mitoraka ity kamboty dia mandray ny fitsaboana prequel miaraka amin'i Kamboty: Famonoana Voalohany. Miaraka amin'ilay sarimihetsika vaovao dia misy trano vaovao hozaraina ihany koa. Amin'ity indray mitoraka ity fa tsy avoaka ao amin'ny Warner Bros. toy ny horonantsary voalohany, ity sarimihetsika ity dia havoaka ao Paramount. Ny fanovana dia mety haneho fomba vaovao amin'ny famoahana ny sarimihetsika. Nahita horonantsary an-taonina maro izahay, nanomboka tamin'ny resaka teatra ka hatramin'ny famoahana an-trano. Noho izany, tsy hahagaga anay raha miafara amin'ny famoahana ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny serivisy streaming Paramount.
Isabelle Fuhrman indray dia hanaisotra ny endrika maha-maniac kely adala azy amin'ny alàlan'ny fampiasana karazana mazika amin'ny tabilao. Fomba fijery an-tery, make-up ary fanaovana prosthetika ary mazava ho azy fa fihetsika taloha fotsiny. Betsaka ny endrika sy fahatsapana an'i Esther dia avy amin'ny fahafahan'i Fuhrman mampita ny fihetsiky ny zaza. Izy rahateo milalao vehivavy antitra mody zaza.
Kamboty: Famonoana Voalohany mandeha toy izao ny synopsis:
Leena Klammer dia namorona fandosirana mamirapiratra avy amin'ny toeram-pitsaboana ara-tsaina estoniana ary nandeha nankany Amerika tamin'ny alàlan'ny fisandohana ny zanakavavin'ny fianakaviana manankarena very. Fa ny fiainam-baovao an'i Leena amin'ny maha "Esther" dia tonga miaraka amin'ny ketrona tsy ampoizina ary mampitsoka azy amin'ny reniny izay hiaro ny fianakaviany amin'ny vola rehetra.
Kamboty: Famonoana olona voalohany kintana Isabelle Fuhrman sy Stiles dia miaraka amin'i Rossif Sutherland, Matthew Finlan ary Hiro Kanagawa.